Yakakura yakawandisa renji inogara iine simba yekuchaja module Vagadziri, Vatengesi - China Yakakura yakafara renji inogara yakasimba simba yekuchaja module Fekitori
UR100030-SW (B) EV kuchaja module yakanyanya kugadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo ine yakafara voltage huwandu hwesingaperi simba kuburitsa. Zvakare ine yakasimba simba chinhu, yakanyanya kushanda, yakakwira simba kuomarara, yakavimbika kuvimbika, kungwara kutonga uye wakanaka chitarisiko mukana. Hot pluggable uye akangwara edhijitari ekudzora matekinoroji anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.
UR75028-SW EV kuchaja module yakanyatsogadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo ine yakafara voltage huwandu hwesingaperi simba kuburitsa. Zvakare ine yakasimba simba chinhu, yakanyanya kushanda, yakakwira simba kuomarara, yakavimbika kuvimbika, kungwara kutonga uye wakanaka chitarisiko mukana. Hot pluggable uye akangwara edhijitari ekudzora matekinoroji anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.